Umlo we-COVID 2019, SiyaSebenza! -Iindaba-VSmile Co., ltd
Yilwa i-COVID 2019, Sisebenza!
Ixesha: 2020-03-26 I ngxelo:44
Ukunceda abathengi bethu ukuba balwe ne-COVID 2019, sisebenza!
Sithumela iimaski kubathengi bethu abaswele iimaski. Ukunceda abathengi ukuba balwe ne-COVID 2019, sisebenza!
Namhlanje sipakishe iimaski ezininzi zokuya phesheya, kuba abathengi bethu abaqhelekileyo bafuna uncedo. Kuya kufuneka sibanike izandla ngenxa yokuba nabo basincedile kumaxesha anzima e-China. Asithengisi ubudlelwane kuphela, singabahlobo ngakumbi. Njengoko intsholongwane ye-corona iqhubeka isasazeka, amazwe amaninzi nabantu bayosuleleka.
Ungazigcina njani ukhuselekile kwintsholongwane yenoveli? Nazi ezinye iingcebiso kuwe:
1. Zama ukuhlala ekhaya, nokuba urhulumente wakho umiselwe njani, le yeyona ndlela isebenzayo.
2. Xa kufuneka uphumile, nceda unxibe imaski yobuso kwaye ungachukumisi nantoni na esidlangalaleni kwaye ungachukumisi amehlo akho ngezandla. Xa ubuyela ekhaya, nceda uhlambe isandla sakho imizuzwana engama-20 kwaye ubeke iintsholongwane kwidyasi nakwizihlangu nge-75% yotywala.
3. Xa efumana abantu abachaphazelekayo, urhulumente wethu uyakubafumana bonke abantu awakhe wadibana nabo kwaye waqhagamshelana nabo ngaphambili, enyanzelisa ukuba bahlale ekhaya, emva kweentsuku ezili-14, ukuba akukho mpawu inxulumene nentsholongwane, oko kuthetha ukuba bakhuselekile.
4. Ukuba bachaphazelekile kwaye abakho semngciphekweni, banokusebenzisa amayeza esiNtu amaTshayina okanye amayeza asesibhedlele, bahlale kwigumbi elahlukileyo ukuze bachache. Ukuba ayisiyongozi, uninzi luya kuphila ngeli xesha.
5. Zigcine wonwabile kwaye wenze umthambo ngakumbi ukuze uzigcine usempilweni kwaye ungaphumi rhoqo.
Ngendlela, inkampani yethu inesitokhwe esincinci seemaski, ukuba ufuna, nceda unxibelelane nathi, sikulungele ukukunceda. Ndikunqwenelela okuhle！
Okokugqibela, ukuba ufuna uku-odola iimveliso zenkampani yethu, ezinje ngeebhloko zamazinyo e-zirconia, i-milling burs, i-PMMA PEEK kunye ne-WAX. Ungalisebenzisa eli xesha uku-odola. Kuba xa ubhubhane ugqithile, kunokubakho ukushiyeka kwezinto, kuyacetyiswa ukuba uzigcine kwangaphambili. Gcina isitokhwe esaneleyo xa yonke into ihamba kakuhle. Qalisa umsebenzi ngaphandle kokulinda izinto.
Ungaqhagamshelana nathi kwaye samkelekile. Ngoku hlala ekhaya, linda ukuthunyelwa.
Yonwabela ixesha elininzi nosapho kunye nabantwana. Yonke into iza kulunga.
Ngethamsanqa kubo bonke abahlobo bam.
(Imveliso entsha -I-3D PLUS Multilayer Zirconia block)
Usetyenziso olunxulumeneyo клиентов подготовиться к коронавирусу COVID 2019
Мы отправляем маски нашем клиентам, которым не хватают маски и ни-где могут покупать. Iincwadi zeWebhusayithi
НАДО - Надо ходить с маской при плотной толпой;
Ngena kwi-75% спиртом на вещи когда домой.
Usetyenziso olungakumbi nge- ДЕ
Yonke into ngephanyazo, yonke into iya kudlula;
Ukupasa kuya kuba kuhle.
I-PREV: Wamkelekile kwiVsmile Factory
OKULANDELAYO : Imveliso eNtsha-- i-3D Plus iMultilayer yeZirconia iBloko engenisa
Vsmile HappyZir UT kwi-Anterior